ပြီးပြည့်စုံသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: openSUSE 13.1 !!! | Linux မှ
ပြီးပြည့်စုံသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: openSUSE 13.1 !!!
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများ၊ ဒီလမှာကျွန်မရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့် laptop များ၌ distro မှ distro (နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ရသော) အလွန်ရှုပ်ထွေးသောလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဤမေးခွန်းကိုအသေအချာစဉ်းစားစဉ်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည် :)
အဓိကအချက်ကတော့ငါဟာနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်သစ်ဖြစ်ချင်သူဖြစ်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်။ လှပပြီးအထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များကိုဆာဗာများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့်မှတ်စုစာအုပ်များပေါ်တွင်ဖြန့်ဖြူးလိုသည်။
ကျွန်ုပ်သည် openSUSE 13.1 ကိုကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများတွင် Debian နှင့် CentOS အစားကျွန်ုပ်၏ PC နှင့် Fedora အစားထိုး laptop တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။
ဒါဟာ tato ထွက်လှည့် debian como CentOS အရမ်းခေတ်နောက်ကျ နှင့်ဆာဗာများပေါ်တွင်တောင်မှနောက်ဆုံးပေါ်ထားရန်ရှိသည်သောအလုပ်များရှိပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Fedora သည်အလွန်ယခုတွင်ကျယ်လွန်းသည်၊ မကြာခဏဆိုသလိုထူးဆန်းသော bug သည်ပေါ်လာပြီးရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်သို့မဟုတ်သုံးပတ်တစ်ကြိမ် update များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော kernel ကို update လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုမပျော်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့် kernels စသည်တို့ကို uninstall လုပ်ပါ။
OpenSUSE သည် PC များနှင့်ဆာဗာနှစ်ခုလုံးတွင်အလွန်တည်ငြိမ်သော၊.
ငါ OpenSUSE နဲ့ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဆာဗာတွေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒီကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှုကိုမြင်တွေ့ရလို့ကျွန်တော်အရမ်းအံ့သြမိတယ်။
အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုဆာဗာတွေ၊ ငါ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့လက်တော့ပ်တွေပေါ်မှာ install လုပ်စေခဲ့တယ်ဆာဗာများတွင်ပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘဲကျန်ရှိနေသေးသော KDE ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်ပေါ့ပါးသော XFCE ကိုအစားထိုး KDE ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။
ခရစ်စမတ်နေ့ရက်နှစ်ရက်သာဝေးသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်၏စားပွဲခုံကိုပြသပြီး \_ t
ယခု၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင် download ဆွဲရမည်ကို၎င်း၊ ထည့်သွင်းပြီးသောအခါမည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကိုပြသမည် -
သူတို့က terminal ကိုဖွင့်ပြီးရေးသည်:
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော packages များတပ်ဆင်ခြင်း:
zypper install vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar java-1_7_0-openjdk-devel [/ကုဒ်]
optional packages များ:
ထိုအဆင်သင့် !!! ယေဘူယအားအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားသည့် KDE ပါ ၀ င်သည့် openSUSE ရှိပြီးဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်၏ windows theme သည် FormaN၊ KDE အခင်းအကျင်းမှာ Diamant ဖြစ်ပြီးသင်္ကေတများမှာ OxyXmas ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်: http://spacepenguin.de/icons/index.html
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ပြီးပြည့်စုံသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: openSUSE 13.1 !!!
49 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
သင့်ကွန်ပြူတာများ၌သင့်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်အစား OpenSuse 13.1 ကို install လုပ်ပြီး Windows partition ကို restart ပြန်လုပ်သောအခါမတွေ့ပါ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူတူပါပဲ ငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့အနည်းငယ်ကို Netrunner, Kubuntu, Kaos, Chakra မှာသုံးပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာ…ငါ Netrunner ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့သည်
ခင်ဗျားဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုငါမငြင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် GraphSall နဲ့ပတ်သက်ရင် OpenSuse installer ကအကောင်းဆုံးပါ။ ကျွန်တော့်ကိုအကြံပြုခဲ့သည့်တပ်ဆင်မှု (ကျွန်ုပ်ဘာမှပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ) သည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် Windows7ရှိ NTFS ဖိုင်အခန်းကန့်ကိုလေးစားသည်။
ငါ installer အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ငါ Windows ကိုလည်းသုံးတယ်ဆိုတာမှတ်သားထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ reboot ပြန်လုပ်လိုက်ရင် GRUB မှာရှိတဲ့တခြား OS ကိုမပြဘူး။ SW
ဆိုလိုတာက Netrunner၊ Kubuntu (သို့) MintKDE ဟာ OpenSUSE ထက်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအရာအားလုံးကိုအတည်ပြုဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်၊ BlueSystem နဲ့ပိုပြီးလွယ်ကူပြီးပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ်။
ကောင်းပြီ ... တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်လူတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောခြစ်ရာကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဖြန့်ဝေသူအမြောက်အများသည်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်သည်။ အရသာများသည်အရသာရှိပြီးအရသာသည်အရသာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းကို root လိုအပ်သောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်ကျွန်ုပ်အားမတောင်းဆိုလိုပါက…။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် session ကို root or root အဖြစ်အသုံးပြုသည်၊ ပြောင်းလဲရန်အလွန်လွယ်ကူသောအရာတစ်ခုကသင့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုကိုငြင်းပယ်နေသလား။
ထူးဆန်းပါတယ်၊ ငါ openSUSE ကို ၁၁.၀ ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ပြီးအမှန်တရားကတော့ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့ grub ပြproblemနာကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။
သင့်ရဲ့ဂုဏ်ပြုလွှာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ grub ပြforနာအတွက် Windows ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမသုံးခဲ့ပါဘူး၊
ဤအဖြေ Ghermain အဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်
မင်း Archlinux ကိုစမ်းကြည့်လား
ကောင်းပြီ, ငါက repos ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအခြား opensuse, normalillas အပေါငျးတို့သကဲ့သို့တူညီသောမြင်ရ, သင်ပြင်ပမှာထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာငြီးငွေ့စရာတစ်ခုခု။
repos ကို zypper ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည် apt-get ကသူတို့ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သည်နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်
ရိုးရှင်းပါတယ်? ထိုအရွက်ကိုသင် repos တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်အားမှီခိုမှုများနှင့်နောက်တစ်ခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။
zypper ကို အသုံးပြု၍ ကွဲပြားသော repositories မှ package များကိုသင်စီမံနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိရင်မှီခိုမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာမဖြစ်စေချင်ပါ။
Ubuntu မှာပြင်ပ repositories တွေထည့်တဲ့အခါ၊ ဘာကြောင့်မှီခိုရမယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်ထူးဆန်းတာလဲဆိုတာကို ၂၀၀၆ နဲ့တူတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။
Arch နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျတှငျ, repositories ၏အသုံးပြုမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရိုးရှင်းစွာဖြစ်ပါသည်: အဆင်ပြေလက်တွေ့ကျတဲ့, အသုံးပြုသူအဖို့ပွင့်လင်း, တစ်နေရာတည်း၌ရုံနှင့် Zypper ကျောက်ခေတ်၌ကျန်ကြွင်းသောအဆင့်ဆင့်စနစ်ဖြင့်ပေါင်းစည်း။
zypper သည်ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်စရာမလိုပဲနှင့် package များကို ဦး စားပေးစရာမလိုပဲ repositories များကိုထည့်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း / enable / disable လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီးလက်တွေ့ကျသည်။
ကျွန်ုပ်သည် OpenSUSE ကိုကွန်ပျူတာ ၄ လုံးဖြင့် ၄ နှစ်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ တရား ၀ င်တရားဝင်မဟုတ်သော repositories များ မှလွဲ၍ မှီခိုမှုပြproblemsနာများမရှိခဲ့ပါ။ သင်၏ထင်မြင်ချက်သည်အလွန်တိုတောင်းသောအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။
ကောင်းပြီ၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ဘယ်သူမှမစုံလင်ကြဘူး။ ဒါကသူ့အတွက်အနီးဆုံးပါပဲ။
ငါ့အမှု၌, Debian ငါ့ကိုကျေနပ်ပြီငါ Iceweasel (Fedora နှင့် RHEL ပါဝင်သည်) ကိုအဘယ်သူမျှမ distros များအတွက်မဟုတ်လျှင်ငါရွှေ့မည်မဟုတ်။
IceCat ကိုမည်သည့်ဖြန့်ချီမှုတွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည် Fedora တွင်ပြုလုပ်သည်။ သင်၏အကြောင်းပြချက်များကိုငါမသိ၊ Iceweasel တွင် Fedora အတွက် Firefox မရှိသောသို့မဟုတ်အချို့သော forks အချို့ရှိသလား။
Fedora မှ Kernels များကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်သည်။ /
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ OpenSUSE သည်ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ရန်မလိုသေးသောဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ဖြန့်ဝေခြင်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းရန်ငြီးငွေ့သွားပြီး (ပြောင်းလဲသွားတော့မည်မဟုတ်ပါ) ။
Fedora မှာအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်တဲ့ kernel ရှိတယ်။ ငါ nvidia driver ကိုသုံးတဲ့အခါသူတို့ကတစ်နေ့နောက်ကျလာတဲ့ kernel update ထက်ရောက်လာတယ်။ အဲဒါကိုတည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါအရင် kernel version ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာမင်းသိပြီးသားပါ။ အရင်ဆုံးဖျက်လိုက်တဲ့ version သုံးခုကိုအမြဲတမ်းသိမ်းထားတယ်လို့မင်းပြောခဲ့သလိုပဲ။ ငါအရမ်းကွဲပြားတာကိုသုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Fedora နဲ့ OpenSuse နှစ်ခုလုံးကအရမ်းပျော်တယ်၊ ပြproblemsနာမရှိဘူး။
ဤမျှလောက်များစွာသောစမ်းသပ်မှုပြီးနောက်ငါဒီတစ်ခုနှင့်အတူနေ၏။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောအရာမှာသူတို့ပြောသကဲ့သို့ repos ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်မွမ်းမံသည့်အခါတိုင်းသင်ထည့်သွင်းထားသော DVD မိတ္တူတစ်ခုရှိရမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အသစ်ပြောင်းခြင်းများသည်အသစ်ပြောင်းရန်အတွက်အထုပ်၏မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာတွင်ဒီဗီဒီမရှိလျှင်သို့မဟုတ် iso နေရာတစ်ခုယူစရာ iso မရှိလျှင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအပြင်၊ မူရင်း package ကိုဒေါင်းလုပ်ချသည်၊ ၎င်းကိုသင့်အားအသိပေးခြင်းမရှိဘဲနှစ်ကြိမ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုသည်၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးပါက download လုပ်ထားသောအရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်၊ မွမ်းမံမှုတစ်ခုချင်းစီတွင်ထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူများသည်သိသာထင်ရှားနိုင်သည်။ အခြားအသုံးပြုသူများအတွက်) rpm ပါ။ မာလ်တီမီဒီယာတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော် packman repo ကိုသုံးရက်တခါပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းကြောင့်အရာအားလုံးကိုမကြာခဏပြန်ဖွင့်ရန်သင့်အားတွန်းအားပေးသည် (အကယ်၍ သင့်တွင်ရာဂဏန်းများစွာ megabytes ဂိမ်းရှိပါကအတူတူပင်) ။
ကျန်တဲ့အရာတွေအတွက်တော့အရမ်းတည်ငြိမ်ပြီးသပ်ရပ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည် (၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောသောအနကျအဓိပ်ပါယျလုံးဝမရှိသောကြီးကျယ်ခမ်းနားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်) ။ repos သူတို့တိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်၏။
Juanra ၁၉၉၀ ဟုသူကပြောသည်
ငါ Fedora 19 ကို install လုပ်ပြီး (Arch ကို install လုပ်ဖို့သင်ယူနေတုန်း) အဲ့ဒီမှာခဏနေချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Fedora ကအမြဲတမ်း (ငါ့အတွက်) ပြproblemsနာတွေပေးခဲ့တာကြောင့်ငါ Fedora ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပြတင်းပေါက်တွေစတင်ဖြစ်ပွားလာပါလိမ့်မယ်။ အနက်ရောင်နဲ့ဘာမှမတွေ့မြင်နိုင်တော့တစ်ခါမှတောင်မှ netbook ကိုမပိတ်နိုင်ခဲ့လို့မမြင်ရလို့အဖြေမရခဲ့ပါဘူး။
ထို့နောက်ငါ Xubuntu ကိုတပ်ဆင်လိုက်ပြီး၎င်းသည်အစတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ပြslightနာအနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမသိရှိရလျှင် (၎င်းသည်အနည်းငယ်နှေးကွေးသွားပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်အလိုရှိသကဲ့သို့၎င်းကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်နိုင်🙁) ။
နောက်ဆုံးတော့ငါနောက်ထပ် distro တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ OpenSUSE နဲ့ KDE ကိုငါသတိရတော့ OpenSUSE KDE ကို install လုပ်လိုက်ပါ၊ အဲဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးပြsmoothနာမရှိဘူး။ (၁၂.၃ ကနေ ၁၃.၁ ကနေဘာမှပြnoနာမရှိဘူး) ငါလည်းအဲဒီမှာဖြစ်လိမ့်မယ် Arch-configure-use Arch ကိုမည်သို့လေ့လာရမည်နည်း၊ Fluxbox ကိုမည်ကဲ့သို့ customize လုပ်ရမည်ကိုသိရှိပြီး၎င်းအတွက်အချိန်အနည်းငယ်ရှိသည်။
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော "IDEAL" ဖြန့်ဖြူးမှုကိုကျွန်တော်များစွာကြိုးစားခဲ့ပြီး Netrunner ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ KDE အားလုံးသည်၎င်းသည်သူယူဆောင်လာသမျှအရာအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ google မှာရှာဖွေခြင်းကိုဖြေရှင်းလို့မရပါ
Manjaro Linux ကွန်မြူနတီ ဟုသူကပြောသည်
Manjaro နဲ့သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကဒီဟာကတကယ်ဟုတ်သလား။ : မျက်နှာပြောင်:
Manjaro Linux Community သို့စာပြန်ပါ
zypper dup (dist-upgrade) ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ
OpenSUSE + Pacman ၏ပုံမှန် repos ဖြင့်ဒီ command နှင့်ပြproblemနာမရှိခဲ့ပါ။ ပြင်ပ repos များများသုံးလျှင်ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဦး စားပေးကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယိုဟန် Graterol ဟုသူကပြောသည်
yum ပါ ၀ င်သည့် Fedora သည်အဟောင်းများကို kernel များကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်သည်။
Yohan Graterol အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီအစဉ်မပြတ်ငါ kernels ကို uninstalled .. ငါနောက်ဆုံးနှစ်ခုထားရှိမည်။ အကောက်ခွန်မေးခွန်း🙂
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ apt-get ဟာကွဲပြားတဲ့ repos ကနေ package တွေကိုမစီမံနိုင်ဘူး၊ အဲဒါက * buntu ရဲ့ installation တွေပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်
ဤမှတ်ချက်သည် @ pandev92 အတွက်ဖြစ်သည်
Hasher Arg ။ ဟုသူကပြောသည်
သင်ပြောသောဖြန့်ဝေမှုအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်၊ အလုပ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်အသုံးပြုရန်၊ မျှတ။ တည်ငြိမ်သောအသစ်ပြောင်းခြင်းသံသရာဖြင့်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံး All-purpose KDE distro သည် ...
KDE mini me ဗားရှင်းပင်လျှင်စမ်းသုံးကြည့်ပါ၊ အသုံးပြုရန်မလွယ်ပါ။ ရိုးရှင်းစွာနှင့်အခြေခံကျသောစနစ်ဖြင့်ပရိုဂရမ်များနှင့် configurations ပါသောစနစ်တစ်ခုကိုအလွယ်တကူတည်ဆောက်နိုင်သည်။
Hasher Arg မှစာပြန်ရန်
OpenSUSE သည်အလွန်ကောင်းသော distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်အဆင်သင့်လုပ်ရန်သင်လုပ်ရန်လိုသည်။ မည်သူမဆို net တပ်ဆင်မှုတပ်ဆင်မှုသိလျှင်မသိပါ
OpenSUSE မှ (သို့) အခြေခံစနစ်ကိုမည်သို့ install ရမည်နည်း။
Linux မှာကျွန်တော်စလုပ်ကတည်းက ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံး kdebase ကိုကူးယူပြီးထိုအရပ်မှအရာအားလုံးကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်မှာ ၅၆k ဆက်သွယ်မှုသာရှိခဲ့တယ်။ အခုတော့အရမ်းငြီးငွေ့ဖွယ်ပုံရသည်။
download စာမျက်နှာတွင် netinstall option ရှိသည်
ငါမကြာသေးမီကနေ့စဉ်အသုံးပြုသော Debian နှင့်အတူ၎င်းကို Gnome ဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ငါ Gnome3ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့မရဘူး၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမှန်းနားမလည်ဘူး၊ ဒါ့အပြင်ငါ့ PC မှာအရမ်းနှေးကွေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဖယ်ထုတ်ပြီး Xfce ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါနေဆဲ polish ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ငါသည်လည်း E17 ကို install လုပ်ထားတယ်၊ ငါတကယ်ကြိုက်တယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာအချို့ရှိသည်။ စနစ်သည်စပိန်တစ်ဝက်နှင့်အင်္ဂလိပ်တစ်ဝက်ဖြစ်သည်။ နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသံတိတ်သွားသောအသံနှင့်အတူတစ်ခုခု။
ငါလုပ်ခဲ့တာက Yast2 ပါ။ အရာအားလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ configuration panel တစ်ခုရှိတာကောင်းပါတယ်။ အသစ်တစ်ခုနှင့်ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာတစ်ခုမှာတရားဝင်စာမျက်နှာသို့ သွား၍ repositories ကို "ကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်" ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဟုထင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲအခြားခေတ်မီကွန်ပျူတာတစ်လုံး၌စမ်းသပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ငါ Debian ကိုအရမ်းအသုံးတည့်ပြီး openSUSE မှာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ အချို့ directory များနှင့် configuration files များကွာခြားသည်။
မနေ့ကကျွန်တော့်တပ်ဆင်လိုက်တယ်။ networkmanager မှာပြproblemနာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ yast2 နဲ့ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ virtualhost အတွက် lamp ကိုငါ install လုပ်ပြီး apache နဲ့ mariadb ကို activate လုပ်ပြီး deactivate လုပ်လို့ရတာပဲ။ ငါအရင်က opensuse ကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါမသင့်တော်ဘူး။ ဒီအချိန်ငါအရမ်းကြိုက်တယ်ဒီနေ့ပဲဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒီနည်းလမ်းမရှိဘူး၊ ဖြေရှင်းနည်းကိုငါရှာမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ grub တောင်မှလူကိုယ်တိုင်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး kde theme ကိုကြိုက်လို့ဖြစ်သည်။
ငါလတ်တလော openSUSE ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြောင်းမှတ်ချက်ပေးချင်တယ်။ ငါအရမ်းမကြာသေးမီကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါမှာ Kubuntu 13.04 ရှိခဲ့ပြီးအကူအညီပြီးရင် 13.10 အထိတိုးခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်၊ တော်တော်များများကျရှုံးခဲ့တယ်။ ငါဒီပြန်လည် install လုပ်ခဲ့တယ်, နှင့်ခံစားချက်များကိုအလွန်ကောင်းလှ၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါပြီးသား plasmoid rememberthemilk ကိုသုံးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် korganizer သည်ကျွန်ုပ်၏ gmail ပြက္ခဒိန်နှင့် WELL နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးအားထပ်တူပြုသည်။ lyx ကကျွန်တော့်ကိုထူးဆန်းတဲ့အားနည်းချက်တွေမပေးပါဘူး။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ပိုမိုမြင်သောအရာများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ငါသည်လည်းပိုပြီးပွတ်နှင့်ပိုကောင်းချောကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် community repositories ပိုများနေပါတယ်။ repositories ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ထို option တွင်၎င်း command ကိုထည့်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Yast ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသော "community repositories" ရှိသည်။ ငါဥပမာ, libdvdcss, Mozilla, Libreoffice repositories တွေအကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်။ အချို့ကအခြားသူများကို ဦး စားပေးမည်ဆိုပါက၎င်းတို့အားလုံးကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်နိုင်မလဲ။
ဤအမှု၌ကျွန်ုပ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဇုန်မှထွက်ခွာသောအခါမကြာမီသင်ပြန်လာလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည် fedora: p သို့သော်နောင်တွင်သင်သည် CentOS7ကိုစမ်းကြည့်တော့မည်မဟုတ်၊ စဉ်တွင်။
CentOS7ကိုကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်။ သူက RHEL လိုမျိုးများစွာသောဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် version6ဟာလုံးဝအသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံရမှာပါ။
ငါအရသာအတွက်အလွန်အမင်းများလွန်းနေပြီးကောင်းသော distro ကြောင့်ငါ fedora ကိုပိုနှစ်သက်သည်။
မင်းမှာဘာသာစကားနဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ မင်းမှာ system တစ်ဝက်လောက်ရှိတယ်၊ နောက်တစ်ဝက်ကအင်္ဂလိပ်မှာရှိတယ်။ အဲဒါကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်နေတာပဲ
အမှန်မှာ၊ desktop ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၌အရာခပ်သိမ်းကောင်းမွန်ပြီး YaST> language မှကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Laptop ပေါ်တွင်မူကားမမှန်ပါ။ ၎င်းကိုလုပ်ရန်လမ်းကိုလည်းမမြင်ရပါ။
openSUSE ထဲကဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြproblemနာမှမရှိဘူး Yast မှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာစကားကိုရွေးပြီး terminal ကိုဖွင့်ပါ။
zypper update ကို
ဤအရာသည်ဘာသာစကားကိုလုံးလုံးလျားလျား install လုပ်လိမ့်မည်။ ပြီးရင် PC ကို restart လုပ်လိုက်ပါ။
ဤအဆင့်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ကျွန်ုပ်သည် openSUSE DVD ကို install လုပ်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အရေးကြီးသောပတ် ၀ န်းကျင်များအပြင်ဘာသာစကားများပါ ၀ င်သည့်အပြင်၊
ကျွန်တော့် ဦး လေးက ............. စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူ Linux ကိုသုံးပြီးသုံးပတ်လောက်ပဲကွန်ပျူတာမှာသုံးခဲ့တယ်။
Emulating Linus Torvalds - ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်ရေးစနစ်ကိုအစမှစတင်ပြီးဖန်တီးပါ (၂)